Malunga nathi -I-Beijing GGLT yezeNzululwazi kunye neThekhnoloji CO., Ltd.
I-Beijing GGLT yezeNzululwazi kunye neTekhnoloji ye-CO., Ltd.ngumenzi wezixhobo ze-laser zobuchwephesha kunye noMthathi-nxaxheba wokuqala, ohlala eBeijing, China. Ukusukela ngo-2010, i-GGLT iseke isebe lokuthengisa ngaphakathi, isebe lokuthengisa phesheya kwezilwandle, iziko le-R & D, isebe lemveliso kunye nesebe emva kokuthengisa. Njengomnye wabavelisi bokuqala bezinto zase China, iiMveliso zibandakanya indawo ezininzi zetekhnoloji ye-Picosecond laser, i-co2 laser laser, i-diode laser, i-Ndyag laser, i-EMsculpt, i-HIFU, i-Cryolipo slimming, i-Vela-shape, i-multifunctional ipl laser kunye nomatshini wokunyamekela ulusu, njl. Sikholelwa kukhuseleko, ukugqwesa kunye nokuhambisa izixhobo zezixhobo ozijongileyo.
I-GGLT iyazingca kwindlela yethu ye-bespoke yezixhobo ezahlukeneyo zelaser, ekuvumela ukuba ufezekise iziphumo ezifanelekileyo. Inkonzo yabathengi ebalaseleyo kunye nolwaneliseko lusenkampanini yenkampani yethu. Sahlukana kwimiboniso yamazwe ngamazwe minyaka yonke, kwaye sinokutyelela abathengi basekhaya.
Sinokubonelela ngenkxaso yeshishini lendawo kunye nabaphandi bethu bezentengiso kunye neenjineli ezinamava kolu shishino. Ngeenzame, i-GGLT ifumene inani ukuba izatifikethi zonyango zasekhaya nezamazwe aphesheya, ezinje nge (TUV) CE, (TUV) ISO13485, uyilo lweModeli yePatent, kunye nelungelo lokungenisa kunye nokuThumela ngaphandle, kunye nesiQinisekiso seShishini esiPhakamileyo.
Iimveliso zethu zithunyelwa kumazwe aseMelika, eYurophu, kuMbindi Mpuma, eAfrika nase Mzantsi mpuma Asia. Iimveliso zethu zisetyenziswa ngokubanzi kwizibhedlele ezahlukahlukeneyo ezinkulu neziphakathi, izibhedlele ezikhethekileyo kwezesikhumba, utyando lweplastiki kunye neesalon zobungcali. Izimvo ezilungileyo zifunyanwa kuninzi lwabathengi kunye nezigulana.inkampani yethu ihlala ikholelwa "kumgangatho wokuqala, ixabiso lokuqala, inkonzo yokuqala" ngeenjongo zeshishini, sisebenzisa izibonelelo zethu ukubonelela ngamandla aqhubekayo kuphuhliso olukhawulezayo lweshishini lobuhle.
Inkonzo yeQela lokuThengisa
Nika intshayelelo yezixhobo zobungcali, umsebenzi, ulwazi lweparameter, khetha esona sixhobo sibiza indleko, kwaye unokubonelela ngeseti epheleleyo yeenkqubo zokukhetha izixhobo ukunceda ishishini lakho ngeeyure ezingama-24 zenkonzo ye-Intanethi.
Abasebenzi abaqeqeshwe kakuhle banikezela ngesixhobo esikhawulezayo nesisebenza ngokufanelekileyo, ukuvavanywa kwe-QC kunye nenkqubo yokupakisha ukuqinisekisa ukuba izixhobo aziyi konakaliswa ngexesha lokuhamba. Nika iminyaka emi-2 iwaranti kuwo wonke umamkeli womatshini, ulondolozo lobuchwephesha bobuchwephesha.
I-GGLT iphuhlise ngokuzimeleyo inkqubo yoqeqesho lobuchwephesha ekuhambiseni izakhono ezikumgangatho ophezulu ekusebenzeni kwezixhobo zethu kwifayile efayilwayo. Iqela lokusebenza koqeqesho ikakhulu lifundisa abathengi indlela yokusebenzisa izixhobo ukuze basebenze kakuhle, ikakhulu bagxile ekwandiseni ukusebenza kakuhle.